अधिकांश मिस नेपालले मोडलिङ र अभिनय करिअर रोजेका छन् । तर उनले भने त्यो पुरानो ट्रेन्डलाई फलो गरिनन् । बरु उनले व्यवसाय र रोजगारी रोजिन् । जसबाट उनलाई नाम, दाम, सफलता सबै मिलिरहेको छ । उनी अर्थात् सदीक्षा श्रेष्ठ ।
केही पहिले थाइल्यान्डबाट मास्टर सकेर फर्किएकी उनी २०१० की मिस नेपाल बिजेता हुन् । मिस नेपालको उपाधि चुम्दै गर्दा उनी अभिनयमा होमिन्छिन् भन्ने धेरैको अनुमान थियो । केही फिल्मकर्मीले त उनका अगाडि अफरसमेत थुपारेका थिए । तर पहिले अध्यायन र त्यसपछि व्यवसाय उनको प्राथमिकतामा पर्यो । साथसाथै जागिरे जिम्मेवारी पनि उनले निर्वाह गरिरहेकी छन् ।
पूजा इन्टरनेसनलको फोक्स वागेन जर्मन गाडीको ब्रान्ड म्यानेजर भएर उनी मार्केटिङको जागिर गरिरहेकी छन् । यो संस्थामा उनी दैनिक दसदेखि पाँचको ड्युटी गर्छिन् । बिजनेसको प्लान गर्ने, मिडियासँग डिल गर्ने, ब्रान्डलाई प्रगतिको मार्गमा हिँडाउने उनको जागिरे कर्म हो । यसको अलवा उनी एसपी फर्निचरमा पनि ब्रान्ड मार्केटिङका रूपमा आबद्ध छिन् । एभरेस्ट बैङ्कको ब्रान्ड एम्बेस्डर त छँदैछ ।
बिजनेसमा भने उनले कस्मेटीक क्षेत्र रोजेकी छन् । ‘सिवान कलर्स’को सौन्दर्य उत्पादन व्यवसाय उनले गत डिसेम्बरबाट सुरु गरेकी हुन् । यो ब्रान्ड नेपाल उनी मार्फत भित्रिएको हो । थाइल्यान्ड अध्यायनको सिलसिलामा आफैले प्रयोग गरेको यो कस्मेटिक आइटम राम्रो, भरपर्दाे र उपयुक्त प्राइजमा भएकाले उनले बिजनेस थालेकी हुन् । ‘सिवाना कलर्स’ यो एउटा थाई ब्रान्डको कस्मेटिक हो । थाई कम्पनीले आफ्नो कस्मेटिक ताइवान र कोरियाबाट तयार गर्ने गर्दछ’, उनले भनिन्– ‘कोरिया र ताइवान कस्मेटिकका लागि विश्वमा चर्चित छ ।’ सानो भए पनि आफ्नो बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने उनको सानैदेखिको सोच यही बिजनेसले पूरा गरिदिएको छ । उनी आफ्नै कम्पनी ‘सिभान नेपाल’ मार्फत यसको बिजनेस गरिहेकी छन् ।
‘मिस नेपाल २०१०’ को उपाधि बिजेता बनेपछि उनी हराइन् भन्ने पनि भेटिए । उनी भने २०१० देखि अहिलेसम्मको अवाधिमा आफूले धेरै गरेको बताउँछिन् । उपाधि चुमेपछि उनले सबैभन्दा पहिले ‘मिस वल्र्ड’मा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिन् । त्यतिबेला आईएसी सकाएकी उनले ब्याचलर र मास्टरसमेत सकाइन् । मास्टरमा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवीको हातबाट गोल्ड मेडलसमेत थापिन् । विद्याभूषण पदकसमेत उनले यो ८ वर्षको अवधि बुझेकी छन् ।
उनी फ्रिलाएन्सर एमसी पनि हुन् । उनले एमसी गरेको कार्यक्रमको लिस्ट उतार्ने हो भने लामो हुनसक्छ । उनी स्कुले जीवनदेखि नै होस्ट गर्दथिन् । ‘त्यतिबेला रहरले गरेँ, अहिले व्यावसायिक रूपमा गरिरहेकी छु’– उनले भनिन् होन्डा कम्पनीको ५० वर्ष पुगेकोदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टर उद्घाटन कार्यक्रमसम्म उनले होस्ट गरेकी छन् । केही सार्क सम्मेलनको अलवा विभिन्न सङ्घ संस्था, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रममा समेत उनी होस्ट रहेकी थिइन् ।
फेसन डिजाइनर होइन
उनी अहिले ललितपुर मानभवनमा रहेको ‘डिभा बुटिक’सँग पनि आबद्ध छिन् । त्यसैले धेरैले उनी फेसन डिजाइनर पनि भएको अनुमान लगाउन सक्छन् तर होइन । केही पहिले ललितपुरको सातदोबाटोमा खुलेको ‘डिभा बुटिक’की सञ्चालिका जेनी श्रेष्ठ र उनी अहिले एउटै जिममा जान्छन् । सोही सिलसिलामा झँगिएको मित्रताले गर्दा जेनीको बुटिकका लागि पहिरन लिन उनी विदेशसम्म पुगेकी छन् । यो बुटिकले अहिले ललिपुरको मानभवनमा पनि शाखा विस्तार गरेको छ । शाखा विस्तारको समयमा उनले जेनीसँग अरू केही पनि राख्न मिल्छ भनेर सोधेकी थिइन् । ‘कस्मेटिक राख्न मिल्छ भनेर जेनी दिदीले भन्नुभयो’ उनले भनिन्– ‘आफूले अनलाइन व्यवसाय गरिहेको कस्मेटिक बुटिकमा पनि राखेकी छु ।’ बिदा तथा फुर्सदको दिन बुटिकलाई पनि समय दिने उनले बताइन् ।
कस्मेटिक व्यवसाय उनले थालेको धेरै भएको छैन । गत डिसेम्बरबाट सुरु गरेकी हुन् । आँखा, गाला, ओठ अझ सीधै भन्नुपर्दा अनुहारमा चाहिने सबै कस्मेटिकका सामान व्यवसाय गरिरहेकी छन् । सानैदेखि बिजनेसमा रुचि भएको बताउने उनले आफ्नै कम्पनी दर्ता गरेर कस्मेटिकको अनलाई व्यवसाय सुरु गरेकी थिइन् । अडर आएका आफ्ना सामान अनलाइन डेलिभरी कम्पनीसँग मिलेर घरसम्म पु¥याउने चाँजोपाँजोसमेत उनले मिलाएकी छन् ।
अभिनय चाहना भएन
‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेझैँ’ कतिपयको बच्चा बेलादेखि नै अभिनयतिर रुचि हुन्छ । तर मेरो अभिनयतिर कहिलै रुचि थिएन’– अभिनय प्रसङ्गमा उनले थपिन्– ‘मिस नेपाल पनि ग्ल्यामर फिल्ड भएकाले टाइटल बिजेता बनेपछि धेरै अभिनयतिर होमिएका छन् ।’ आफूलाई कहिलै चलचित्र अभिनय रुचि नभएको उनले बताइन् । उनलाई पढ्न, बिजनेस गर्नतिर भने सानैदेखिको रुचि थियो । त्यसो त उनी समय मिलेसम्म, भ्याएसम्म सबै चलचित्र हेर्ने गर्छिन् । तस्बिर देखाएर सोध्यो भने कलाकार चिन्न गाह्रो हुने बताउने उनले हलिउड, बलिउड र नेपाली सबै प्रकारका फिल्म हेर्ने गरेकी छन् । केही चलचित्रको प्रिमिएरमा समेत पुग्ने गरेकी उनले पछिल्लो समय हेरेको नेपाली फिल्म ‘ब्लाइन्ड रक्स’ हो ।
‘राजनीतिमा सबैको रुचि हुनुपर्छ’, उनका शब्द हुन् यी । ‘किनभने यसले सबैलाई असर गरिरहेको हुन्छ’, उनले थपिन् । रुचि भए पनि उनको राजनीतिमा होमिने विचार भने छैन । अनलाइन समाचार, ट्विटर, फेसबुकलगायका माध्यबाट उनले राजनीतिक उतार चडाब नियाल्ने गरेकी छन् । ३ महिना यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी भएका ३ वटा कार्यक्रम आफूले होस्ट गरिसकेको उनले बताइन् ।
मेरो ब्वाइफ्रेन्ड छ
म राम्री छु, दयालु छु, ज्ञानी छु, सेन्टिमेन्टल छु भनेर उनी आफ्नो बखान धेरै गर्न सक्छिन् । उनको सबैभन्दा राम्रो बानी पङ्चुअल हो रे । ‘कार्यक्रममा ढिला जाने, ढिला सुरु गर्ने, नेपाली समय भनेर क्षमा दिने, त्यो मलाई मन पर्दैन’ उनले अगाडि भनिन्– ‘म समयमै पुग्छु र अरूले पनि समयको ख्याल गरोस् भन्ने चाहन्छु ।’ उनी अहिलेसम्म पनि सिङ्गल छिन् । यसको मतलब उनी खाली भने होइन । उनको ब्वाइफ्रेन्ड छ । विवाह नभएकाले उनले आफूलाई सिङ्गल बताएकी हुन् ।
१९ वर्षकी थिएँ
मिस नेपाल हुँदा उनी १९ वर्षकी थिइन् । आईएसीको परीक्षा सकेपछि उनले यसमा भाग लिएकी हुन् । मिस नेपाल बन्ने चहना सानैदेखिको भने होइन । यसको पनि एउटा कथा छ । उनी आईएसी परीक्षा सकाएर बसेकी थिइन् । सो समय उनले पत्रपत्रिकामा मिस नेपालको विज्ञापन देखिन् । विज्ञापनमा यस पटकको मिस नेपालले कार उपहार पाउने भन्ने थियो । ‘विज्ञापन हेरेपछि मैले आमालाई जिस्किएर गाडी चढ्न मन छ त भनेर सोधेँ । मिस नेपाल बनेर ल्याउँ ? भने’– उनले ती दिन सम्झिइन्– ‘जिस्किँदा जिस्किँदै मिस नेपालको आवेदन भरेँ ।’ आवेदन दिनुको अर्काे कारण मिस नेपालकी ट्रेनर रचना गुरुङ पनि हुन् । उनले रचनाको विषयमा धेरै सुनेको थिइन् । रचनासँग ट्रेडिङ लिने मनसायले पनि मिस नेपालमा सहभागी भएकी हुन् ।
मेकअप आफ्नै लागि गर्नुपर्छ
मानिसले फेसन, मेकअप सबैभन्दा पहिले आफ्नै लागि गर्नुपर्ने बताउने उनी गाजल, लिपस्टिक र मस्कार लगाएर हिँड्न रुचाउँछिन् । मेकअप गर्न नभ्याएको दिन के नपुगेको, के नमिलेको जस्तो उनलाई हुने गर्छ । फेसन र कस्मेटिकप्रति सानैदेखिको रुचि भएकी उनी बिजनेस गर्न थालेपछि त्यसको विशेषज्ञ नै भएकी छन् । पहिरनप्रति भने उनको बेग्लै धारणा छ । ‘कुनै पहिरन जतिसुकै राम्रो भए पनि मेरो साइजमा छैन, मलाई राम्रो देखिन्न, तानेर बस्नुपर्छ, बस्दा अड हुन्छ भने मलाई मन पर्दैन ।’, उनले सुनाइन् आफूलाई कम्फर्टेबल हुने जुनै पहिरन पनि लगाउने उनी क्याजुअलमा जिन्स, टिर्स लगाउन औधी रुचाउँछिन् ।
भर्खर २६ टेकेँ
१९ वर्षमा मिस नेपालको उपाधि चुमेकी उनी आफू भर्खर २६ टेकेको बताउँछिन् । त्यसैले पनि उनले अहिलेसम्म जीवनको विषयमा कुनै सपना देखेकी छैनन् रे । भनिन्, ‘सपना देख्न बल्ल सुरु गर्दैछु । ठूलोठूलो सपना देख्न बाँकी छ ।’ फुर्सदको समय चलचित्र, सिरियल, युट्युब हेर्न रुचाउने उनी सामाजिक सञ्जालमा पनि केही समय बिताउँछिन् । सामाजिक सञ्जालमा नयाँ तस्बिर पोस्ट गर्ने उनको अर्काे शौख हो । पछिल्लो केही समययता उनले सामाजिक सञ्जालमा कस्मेटिक आइटमका तस्बिर सेयर गर्ने गरेकी छन् । किन ? प्रश्न राख्न नपाउँदै उनले उत्तर दिइन् ‘अहिले बिजनेसमुखी भएकी छु ।’
राम्रा केटी आएका छन्
चाइना, जापान, दुबई, आबुदाबी, थाइल्यान्ड, कोरिया, अमेरिकालगायत उनले धेरै देश घुमिसकेकी छन् । पहिलो ट्राभल मिस नेपाल भएपछि मायोजको विज्ञापनका लागि भारत गएकी थिइन् । हरेक वर्षको मिस नेपालको संस्करण राम्रोसँग नियाल्ने गरेकी उनी अहिले धेरै विकास भएको बताउँछिन् । ‘मिस नेपालमा भाग लिने छानिने केटी अझै राम्रा राम्रा छन्’, उनको अर्काे बुझाइ ‘क्षमता, आत्मविश्वास झन् धेरै देखिएका छन् ।’
रुचिले समाज सेवा हुँदैन
समाज सेवातिर पनि रुचि भएकी उनी रुचिले समाजसेवा नहुने बताउँछिन् । गक्षले दिन्छ, आफूसँग एक्स्ट्रा छ भने समाजको सेवा सबैले गर्नुपर्ने धारणा उनको रहेको छ । ‘पहिले आफूलाई पुगेपछि समाज सेवा गर्ने हो’, उनले भनिन् ‘आफ्नो घैँटो भरिएपछि वा आफूलाई पुग्नेभन्दा बढी छ मात्र अरूलाई दिने हो ।’ आफ्नो घैँटो पूरा नभएकाले अरूलाई दिन नसक्ने उनको बुझाइ हो ।